Ubaba wochithwe yiChiefs ufuna ikhokhe imali yendodana yakhe | News24
Ubaba wochithwe yiChiefs ufuna ikhokhe imali yendodana yakhe
Cape Town – Ubaba walowo obengumdlali weKaizer Chiefs, uSiyanda Xulu, nokunguChristopher, uthi indodana yakhe ishiywe inengekile yiKaizer Chiefs futhi ayikwazi ukuqhubekela phambili njengoba ilinde ukuthola imali yokuchithwa yileli qembu kanye namaphepha ashoyo ukuthi isingajoyina elinye iqembu, kubika iKickOff.
UXulu wajoyina Amakhosi ngaphambi kwesizini ka-2015/16 nalapho asayina khona iminyaka emihlanu futhi wafika kulindelwe lukhulu kuyena, ngemuva kokuchitha iminyaka emithathu neqembu laseRussia, iFC Rostov.
Nokho izinto azihambanga njengoba kwakulindelwe, njengoba uXulu aqala imidlalo eyisithupha nje kuphela kumasizini akhe amabili eNaturena ngaphambi kokuba amenyezelwe kanye nabanye abadlali abachithwe yiChiefs ngesonto eledlule.
Ngokuqonda kweKickOff, bekungasekho ukuxhumana phakathi kukaXulu kanye nomqeqeshi uSteve Komphela, nokwenze lo mdlali wasala enengekile ngokungathenjwa kanye nokungabongwa yilo umqeqeshi.
OLUNYE UDABA:IKaizer Chiefs idedele abadlali abayisikhombisa
Phezu kwalokho, uXulu ukuthola kunzima ukuthi adlulise isikhathi esimbi abe naso kuChiefs ngemuva kokudedelwa njengoba esalinde le kilabhu ukuthi imkhokhele imali yakhe kanye nokuthi imnike amaphepha okumkhulula.
“Ayikho inkinga ngeChiefs, kodwa kudingeka banginike amaphepha akhe [okumkhulula] futhi kudingeka baphinde bamkhokhele ngoba useneminyaka emithathu esele nabo,” uyise kaSiyanda Xulu utshele iKickOff.com. “Ngakho kudingeka bamkhokhele imali yakhe bese bekhipha [amaphepha] okumkhulula futhi ngikholwa ukuthi uzoyithola enye ikilabhu.
“Sengikushilo lokho, vele uphoxekile ngokukhululwa, kodwa ukuzulazula kanye nokukhuluma emaphapheni angeke kusize, angeke kusize. Okubalulekile manje ukuthi iChiefs kumele ikhokhe imali yakhe bese ikhipha amaphepha akhe ukuze ezokwazi ukuhamba bese edlala ibhola.”
Ubaba kaSiyanda uthi kunenqwaba yamaqembu akuleli asekhombise ukuba nentshisekelo yokusayina indodana yakhe, nathi akangabazi ukuthi izothola iqembu ngungakaqali isizini ka-2017/18.